March 2, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'March 2nd, 2017'
Sidii Khayre Xilka Kula Wareegay (VIDEO)
Ra’iisal Wasaarahii hore Mudane, Cumar Cabdirashiid ayaa soo dhaweeyay Ra’iisul Wasaare Khayre, waxaana munaasabadan goob joog ka ahaa xubnaha golaha Wasiirada ee xilka sii heyn doona inta laga soo magacaabayo gole wasiiro oo cusub. Dhanka kale, Ra’iisal Wasaaraha cusub ayaa si gaar ah uga hadlay abaaraha baahsan ee dalka ka jira, waxa uuna ugu baaqay …
March 02, 2017 – Ciidamada dalka Kenya ayaa ka hadlay dagaal ay maanta Ciidamadooda oo garab ka helaya kuwa dalka Mareykan ay ku qaadeen Dagaalyahano ka tirsan ururka Al-shabaab oo ku sugnaa duleedka degmada Afmadow ee Gobolka Jubadda Hoose. Afhayeenka Ciidanka Kenya Joseph Owuoth ayaa warbaahinta dalka Kenya waxa uu u sheegay in Ciidamadooda dagaal …
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Maanta Xilkii Kala Wareegay Ra’iisul Wasaarihii Hore Cumar C/rashiid (SAWIRRO)
March 02, 2017 – Munaasabad xil wareejin ah oo maanta ka dhacday xafiiska Ra’iisal Wasaaraha ayaa waxaa xilkii kula kala wareegay Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane, Xasan Cali Kheyre. Ra’iisal Wasaarahii hore Mudane, Cumar Cabdirashiid ayaa soo dhaweeyay Ra’iisul Wasaare Khayre, waxaana munaasabadan goob joog ka ahaa xubnaha golaha Wasiirada ee xilka sii heyn …
Ahlu Sunna oo Sheegtay Inay Bog Cusub ay la Fureynaan Dowladda Cusub ee Farmaajo
March 02, 2017 – Mas’uuliyiin sare oo ka tirsan maamulka Ahlu sunna Sheekh Isxaaq Mursal Gees-dheere oo la hadlay warbaahinta Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay in ay si aad ah u soo dhaweynayaan Hadalkii Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi (Farmaajo), kaas oo ahaa in dhismaha Ciidanka Xoogga Dalka kor loo qaadi doono. Isxaaq Mursal …
Qubanaha & Isbuucan March 02, 2017 (VIDEO)
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Maraykanka Axmed Ciise Cawad oo ka hadlay xaaladaha ka jira dalka Soomaaliya iyo isbedelada Cusub. Nolosha malaayiin Soomaali ah oo halis ugu Jira xaalad daran, kadib markii ay soo food saartay abaar ba’an oo aan shansano la’arag.
Wasiir Labaad oo ka Tirsan Xukuumadda Donald Trump oo Lagu Helay Inuu Xiriir Hoose la Yeeshay Sirdoonka Ruusha (VIDEO)
March 02, 2017 – Wasiirka wasaaradda caddaaladda ee dalka Maraykanka Jess Sessions ayaa lagu helay inuu xiriir hoose la sameeyay safiirka Ruushka ee dalka Maraykanka,intii lagu guda jiray qaban qaabada doorashada madaxweyne Trump . Kulanka uu la yeeshey safiirka ayuusan ka hadlin ka hor inta aan xilka loo dhaarin, Waxaana hadda laga dalabanayaa in u …
Fadeexad Kale ee Xukuumadda Trump (VIDEO)
Laba jeer oo ahayd bishii September ee 2016 ayuu Jess Sessions waxa uu wada hadal la yeeshey safiirka Ruushka u fadhiya magaalada Washington, Sergej Kislyak. VIDEO – 1 VIDEO – 2 Senator-ka Graham ee laga soo doorto gobolka South Carolina ayaa sheegay haddii xeer ilaaliyaha guud ee cadaaladda Mr Sessions uu xiriir la sameeyey Ruushka …
Xarun Lagu Dhaqan Celiyo Dhalinyarada ka soo Goosta Al Shabaab oo Laga Furay Magaalada Kismaayo (SAWIRRO)
March 02, 2017 – Waxaa Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubbada hoose laga furay xarun cusub oo lagu dhaqan celinaayo dhalinyarada ka soo goosta Ururka Al Shabaa ee isku soo dhiibta ciidamada Maamulka Jubbaland. Xaruntan cusub oo ay maalgelinta ku sameysay dowlada Jarmalka, ayaa markii xariga laga jarayay waxaa xafladaasi ka qaybgalay ku xigeenka Safiirka …
Nin Sirdoonka Maraykanka ay ka Qabteen Kuna Jirdileen Dalka Soomaaliya oo Warbaahinta la Hadlay (VIDEO)
March 02, 2017 – Nin Sheegay inuu u dhashay dalka Tanzania oo barnaamij documentery ah laga suubiyay ayaa sheegay in ciidamada sirdoonka maraykanka ay ka qabteen kuna jirdileen magaalada Muqdisho. Ninkan oo lagu magacaabo Suleymaan Abdullah ayaa ahaa nin dhalinyaro oo kaluumaysto ah oo sida uu sheegay kana yimid jaziiradda Zin-Zibar ee dalka Tanzania, isagoo …